Ntinye NAO Ezi echiche na nke oma | Network Meteorology
Como anyị ebuterela mbụ, achoputara ike nke NAO site na ntuziaka NAO. Ntuziaka NAO bụ ọdịiche dị n'etiti nrụgide n'oké osimiri n’etiti ọdụ abụọ dị na gburugburu ebe etiti ala ala nke Iceland na Ugwu nke Azores. A na-eji Stykkisholmur (Iceland) dị ka ọdụ ugwu, ebe Ponta Delgada (Azores), Lisbon (Portugal) na Gibraltar ka eji dị ka ọdụ ndịda.
La usoro dị mma nke ndenye NAO na-ewetara ụfọdụ nrụgide dị elu karịa ka ọ dị na mbụ na mpaghara ugwu dị elu ma dị omimi karịa nrụgide dị ala na Atlantic. Mmụba nke okpomọkụ dị iche na-ebute oke ifufe na oke mmiri na-agafe Atlantic Ocean, yana ịgagharị na mgbago ugwu. N'ihi nke a, enwere oge oyi na udu mmiri na Europe na ọkọchị na oyi na-atụ na Canada na Greenland. Na nke a, ọwụwa anyanwụ US nwere ọnọdụ oyi na ọnọdụ ihu igwe dị jụụ. Iji maa atụ, oke udu mmiri / udu mmiri nke afọ 1989, 1990, na 1995 bụ ihe kpatara site na mkpopu ikuku site na Arctic na Iceland na eriri mmiri dị n'akụkụ Azores na Iberian Peninsula na ifufe ọdịda anyanwụ ka njọ na North Atlantic Ocean. Ifufe ndị ọzọ siri ike site na ọdịda anyanwụ na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ karịa na kọntinent Europe ma na-eduga n'oge oyi n'oge mmiri.
La ihe ojoo nke ntinye akwukwo NAO gosi a adịghị ike subtropical elu nsogbu center ka nke ọma dị ka nke na-adịghị ike Icelandic ala nsogbu center. Mbelata grajii nke belatara na-ebute ntakịrị, ike na-adịghị ike na-agafe n'okporo ụzọ dị n'ebe ọdịda anyanwụ-ọwụwa anyanwụ. Ha na-eburu ikuku mmiri na-aga Mediterenian na na enweghi oke mmiri site na ọdịda anyanwụ ruo n'ọwụwa anyanwụ, ikuku Siberia oyi nwere ike gbadata na oke ala dị ala, yabụ Ugboro ugboro snowfalls nwere ike ime na ndịda Europe. Agbanyeghị, Greenland nwere oge oyi na-ekpo ọkụ. Oge udu mmiri / udu mmiri dị ala nke 1917, 1936, 1963 na 1969 nwere ifufe ọdịda anyanwụ dị nro karịa North Atlantic Ocean kwekọrọ na oge oyi karịa oge oyi Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ntinye NAO Positive na-adịghị mma n'ụzọ
ekele, na-akpali nnọọ mmasị!